ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတခုကတော့ ဟောလိဝုဒ် Walk of Fame လို့ခေါ်တဲ့ အောင်မြင်မှုလမ်းမထက်မှာ ကိုယ်ပိုင်ကြယ်ပွင့်နဲ့ ဂုဏ်ပြုခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်တွေမှာ ထူးချွန်ကြတဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီး ၊ အဆိုတော် နဲ့ ဟာသပညာရှင်တွေကို အထူးမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အောင်မြင်မှု လမ်းမဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ ဟောလိဝုဒ်မှာရှိတဲ့ Vine Street ရဲ့ ဘလောက် ၃ ခုစာနဲ့ Hollywood Boulevard ရဲ့ ဘလောက် ၁၅ ခုစာ ရှည်လျားတဲ့ လျှောက်လှမ်းမှာ တည်ရှိပြီးတော့ အဲဒီ လမ်းမတလျှောက် မှာ မြှပ်နှံထားတဲ့ ကြယ်ပွင့် အရေအတွက်ဟာ ၂၆၀၀ ကျော်ရှိပြီး ကြမ်းခင်ကျောက်ပြားနဲ့ ကြေးကြယ်ပွင့်တို့နဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အခုတင်ပြမှာကတော့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ အောင်မြင်မှုလမ်းမထက်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရတဲ့ အနုပညာရှင်တို့ အကြောင်းကို စုစည်းမှု ဖြစ်ပါတယ်။
၁. Zoe Saldana
မင်းသမီး Zoe Saldana ကတော့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ပဲ ဟောလိဝုဒ် အောင်မြင်မှုလမ်းမထက်မှာ ကိုယ်ပိုင် ကြယ်တပွင့်ကို ရရှိသွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “Guardians of the Galaxy” ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဟာ အဲဒီအထူး အခမ်းအနားကို ကျင်းပဖို့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Mila Kunis နဲ့ အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Saldana ရဲ့ ခင်ပွန်းသည် အီတလီအနုပညာရှင် Marco Perego ကတော့သူတို့ရဲ့ ကလေး ၃ ဦးကို ခေါ်ပြီး ပွဲတက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် အမျိုးသားတီးဝိုင်းဖြစ်တဲ့ NSYNC ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Chris Kirkpatrick, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone နဲ့ Justin Timerlake တို့ဟာ ဟောလိဝုဒ် အောင်မြင်မှု လမ်းမထက်မှာ သူတို့ကို ဂုဏ်ပြု ပြီးထားရှိတဲ့ ကြယ်ပွင့်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဂုဏ်ပြုပွဲကို အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ် တွေဖြစ်တဲ့ Ellen DeGeneres နဲ့ Carson Daly တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
၃. Steve Irwin
“Crocodile Hunter” ရုပ်ရှင်ထဲက စတားတယောက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့သူ Steve Irwin ဟာ သေဆုံး ပြီးမှ ဟောလိဝုဒ် အောင်မြင်မှုလမ်းမထက်မှာ ကြယ်ပွင့်နဲ့ ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့ စတားတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဇနီး Terri ၊ သမီး Bindi နဲ့ သားဖြစ်သူ Robert Irwin တို့က သူ့ကိုယ်စား ဂုဏ်ပြုမှုကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
၄. Eva Longoria
“Desperate Housewives” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသမီး Eva Longoria ဟာ ဟောလိဝုဒ် အောင်မြင်မှု လမ်းမထက်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ရင်သွေးလေးကို လွယ်ထားရတဲ့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ မင်းသမီး Eva ဟာ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Victoria Beckham, Ricky Martin, Anna Faris နဲ့ Felicity Huffman တို့နဲ့အတူ ပွဲကို တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
“RuPaul’s Drag Race” ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ရဲ့ Season အသစ်ကို စတင်လိုက်ချိန်မှာပဲ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ RuPaul ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုလမ်းမထက်မှာ ကိုယ်ပိုင် ကြယ်တပွင့်ကိုရရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၆. Mary J. Blige
အော်စကာနဲ့ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု ဆန်ခါတင်စာရင်းတွေမှာ ပါဝင်မှုမတိုင်ခင်မှာပဲ မင်းသမီး Mary J. Blige ဟာ အောင်မြင်မှု လမ်းမထက်က ကြယ်တပွင့် ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။
၇. Lynda Carter
Wonder Woman ဇာတ်ရုပ်နေရာကို လက်ရှိမင်းသမီး Gal Gadot နေရာဝင်မယူခင် မင်းသမီး Lynda Carter က ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသမီးစူပါဟီးရိုးအနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး Carter ကို ဒီနှစ်မှာပဲ ဟောလိဝုဒ် အောင်မြင်မှု လမ်းမထက်မှာ ဂုဏ်ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈. Minnie Mouse
ကျနော်တို့ရဲ့ အချစ်တော်၊ ဖက်ရှင်ကျကျနေတတ်တဲ့ Minnie Mouse လေးဟာ သူ့ရဲ့ နှစ် ၉ဝ ပြည့်နှစ်ပတ်လည် အတွက် ဟောလိဝုဒ် အောင်မြင်မှုလမ်းမထက်မှာ နောက်ဆုံးတော့ ကြယ်တပွင့် ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၉. Mark Hamill
“Star Wars” ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ Luke Skywalker အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသား Mark Hamill ဟာလည်း ကြယ်ပွင့်နဲ့ ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရသူ တယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ Mark Hamill ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ ကွယ်လွန်သူမင်းသမီး Carrie Fisher ရဲ့ သမီး Billie Lourd က သူ့ကိုဂုဏ်ပြုပေးဖို့ တက်ရောက် လာခဲ့ပါတယ်။
၁၀. Tracy Morgan
ပြင်းထန်တဲ့ ကားမတော်တဆမှုကနေ ကာလကြာရှည် သက်သာလာခဲ့ပြီးနောက် မင်းသား Tracy Morgan ဟာ ဟောလိဝုဒ် အောင်မြင်မှုလမ်းမထက်မှာ ကိုယ်ပိုင်ကြယ်ပွင့်နဲ့ ဂုဏ်ပြုခံလိုက်ရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Topics: ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ Walk of Fame